ShweMinThar: Late talker​ ကလေးများအ​ကြောင်း
က​လေး​တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး အ​​တွေ့ရအများဆုံး ပြဿနာတစ်​ခုက​တော့ စကား​ပြော​နောက်​ကျခြင်းပါ။ ၂၀၁၄ခုနှစ်​မှာ ပြုလုပ်​ခဲ့တဲ့ သု​တေသနတစ်​ခုအရ အသက်​၂နှစ်​မှ ၄နှစ်​ကြား က​လေး၁၀၀မှာ ၁၉​ယောက်​က စကား​ပြော​နောက်​ကျ​သော က​လေး - late talker အဖြစ်​ သတ်​မှတ်​ခံရပါတယ်​။
​မေး >> ဘယ်​လိုက​လေးမျိုးကို Late talkerလို့ သတ်​မှတ်​နိုင်​ပါသလဲ?
​ဖြေ >> အသက်​၂နှစ်​က​နေ ၄နှစ်​ကြား က​လေးတချို့ဟာ ကာယ၊ ဉာဏ၊ ​ပေါင်းသင်းဆက်​ဆံ​ရေးနဲ့ စိတ်​လှုပ်​ရှားမှုဆိုင်​ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု​တွေမှာ ပုံမှန်​ဖြစ်​​ပေမယ့်​ ဘာသာစကား ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ​တော့ ရွယ်​တူက​လေး​တွေနဲ့ ယှဉ်​ရင်​ ​နောက်​ကျတတ်​ကြပါတယ်​။ Speech - Language Pathologist လို့​ခေါ်တဲ့ "ဘာသာစကားဆိုင်​ရာ ​ရောဂါ​ဗေဒနဲ့ ကုထုံးပညာရှင်​​" တွေချမှတ်​ထားတဲ့ စံနှုန်းကို မပြည့်​မီ​သေးတဲ့ က​လေး​တွေကို late talkerလို့ သတ်​မှတ်​နိုင်​ပါတယ်​။
​မေး >> က​လေး​တွေရဲ့ ဘာသာစကား စံနှုန်းဆိုတာ ဘယ်​လိုပါလဲ?
​ဖြေ >> ဘာသာစကား ပညာရှင်​တွေဟာ ​က​လေး​တွေ သူ့အသက်​အရွယ်​နဲ့သူ ​အသုံးချနိုင်​လာကြတဲ့ ဘာသာစကားကို နှစ်​​ပေါင်းများစွာ သု​တေသနလုပ်​ကြတယ်​။ ရလာတဲ့ အချက်​အလက်​​တွေ​ပေါ်မှာ အ​ခြေခံပြီး standard​ စံနှုန်းအ​နေနဲ့​ လမ်းညွှန်​ချက်​​​ပေးခဲ့ကြတယ်​။ ဒီစံနှုန်းကို က​လေး​တွေရဲ့ ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှု မိုင်​တိုင်​များ Language Developmental Milestones လို့လဲ လူသိများပါတယ်​။
>> က​လေး​တွေရဲ့ ဘာသာစကား ဖွံ့ဖြိုးမှု မိုင်​တိုင်​​တွေက တစ်​​ယောက်​နဲ့ တစ်​​ယောက်​လည်း ကွဲပြားကြပါ​သေးတယ်​။
# ဥပမာ - ရွယ်တူ ​​ယောင်္ကျား​လေးနဲ့ မိန်းက​လေးကို နှိုင်းယှဉ်​ရင်​ မိန်းက​လေးက ပိုပြီး​စော​စော စကားစ​ပြောသလို စကားလုံးလဲ ပိုကြွယ်​၀တယ်​။ ဒါဟာ သဘာဝအရ ဦး​နှောက်​ဖွဲ့စည်းပုံ မတူလို့ပါ။
# တချို့​သော က​လေး​တွေက​တော့ ဘာသာစကား တစ်​မျိုးထက်​ ပိုသုံးတဲ့ မိသားစုမှာ ​ပေါက်​ဖွားလာတယ်​။ သူတို့ကို Bilingual Children လို့​ခေါ်တယ်​။ သူတို့ဟာ ငယ်​စဉ်​ဘ၀မှာ ဘာသာစကား နှစ်​မျိုး၊ သုံးမျိုး​လောက်​ မှတ်​ရတဲ့အတွက်​ ​​ရော​ထွေးသွားနိုင်​ပြီး စကား​ပြော​နောက်​ကျမှု speech delay ဖြစ်​ဖို့ ရာခိုင်​နှုန်း ပိုများပါတယ်​။
​မေး >> ဘယ်​လို စံနှုန်းကို မမှီရင်​ late talkerလို့ သတ်​မှတ်​ကြပါသလဲ?
​ဖြေ >> ပညာရှင်​​တွေ အဆိုအရ အသက်​နှစ်​နှစ်​ ပြည့်​ပြီးတာ​တောင်​ စကားလုံးအ​ရေအတွက်​ ၅၀နှင့်​​အောက်​သာ အသုံးချနိုင်​ပြီး၊ စကားလုံး နှစ်​လုံး သုံးလုံးပါတဲ့ စကားစု Phrase​ ​တွေကို မ​ပြောနိုင်​တဲ့ က​လေးများကို Late talkerလို့ ယူဆနိုင်​ပါတယ်​။ သူတို့ဟာ ဘာသာစကားအားနည်းလို့ လူမှုဆက်​ဆံ​ရေးမှာလည်း စိတ်​၀င်​စားမှု ​လျော့နည်းတတ်​ကြပါတယ်​။
​မေး >> Late talker ​တွေကို special needs အဖြစ်​ သတ်​မှတ်​နိုင်​ပါသလား?
​ဖြေ >> Late talker​လေး​တွေက ဘာသာစကား ဖွံ့ဖြိုးမှုသာ ​နောက်​ကျ​ပေမယ့်​ တခြား ဖွံ့ဖြိုးမှု​တွေက​တော့ သာမန်​ပါ။ Autismနဲ့ Down Syndromeလိုမျိုးက​တော့ ဘာသာစကားသာမက တခြား ဖွံဖြိုးမှု​တွေပါ ​နှေး​ကွေး​နေတတ်​ကြပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဆရာ​၊ ဆရာမ​တွေအ​နေနဲ့ ဘယ်​က​လေးကိုမှ special needsလို့ တံဆိပ်​ကပ်​ခွင့်​မရှိသလို ကပ်​ခဲ့ရင်​လည်း ဆရာ့ကျင့်​ဝတ်​ကို ​ဖောက်​ဖျက်​တာပါ။ သံသယရှိရင်​​တောင်​ ပညာရှင်​​တွေနဲ့ ​ဆွေး​နွေးဖို့ မိဘ​တွေကို နားချရပါမယ်​။
​မေး >> Late talker အမျိုးအစား ဘယ်​နှမျိုး​လောက်​ ရှိပါသလဲ?
​ဖြေ >> အဓိကအားဖြင့်​က​တော့ နှစ်​မျိုးရှိတယ်​ဗျ။
# ပထမတစ်​ခုက Speech Disorder - အသံထွက်​ ခက်​ခြင်း ပြဿနာ။ က​လေး​တွေ စကား​ပြောရာမှာ အသံထွက်​ဖို့ ခက်​ခဲခြင်း၊ စကားထစ်​ခြင်း၊ စကားမပီခြင်း၊ အသံထွက်​​​သော်​လည်း အသံထွက်​မမှန်​ခြင်း​တွေဟာ ဒီပြဿနာရဲ့ လက္ခဏာ​တွေပါပဲ။
#​ နောက်​တစ်​ခုက Language Disorder - ဘာသာစကား မကြွယ်​၀ခြင်း ပြဿနာ။ ဒီပြဿနာကိုလည်း (၂)မျိုးထပ်​ခွဲ နိုင်​ပါတယ်​။
(၁) Receptive Language Disorder - ဒီပြဿနာ ရှိတဲ့က​လေး​တွေက သူတို့ကိုပြောတဲ့ စကားအများစုကို နားမလည်​နိုင်​ကြရှာပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့်​ ဆိုရရင်​​တော့ Receptive skill ဖြစ်​တဲ့ listening skill - နား​ထောင်​မှုစွမ်းရည်​ အားနည်းကြတာပါ။
(၂) Expressive Language Disorder - ဒီပြဿနာရဲ့ လက္ခဏာက​တော့ က​လေး​တွေ သူတို့ကို ​ပြောသမျှနားလည်​ကြ​ပေမယ့်​ reply ပြန်​ဖို့၊ ပြန်​​ပြောပြဖို့ ​တော်​​တော်​ခက်​​နေတတ်​ကြတာပါ။ စကားလုံးမကြွယ်​၀တာရယ်​၊ စကားလုံး​တွေကို တွဲမ​ပြောတတ်​တာရယ်​၊ ​ပြောသင့်​တာကို မ​ရွေးချယ်​တတ်​ကြတာ​ရယ်​​ကြောင့်​ သူတို့​ပြောတာကို တခြားလူက နားမလည်​ကြပါဘူး။
​မေး >> မိဘ​တွေအ​နေနဲ့ late talker​လေး​တွေအတွက်​ ဘာ​တွေများ ကူညီလုပ်​​ဆောင်​​ပေးသင့်​ပါသလဲ?
​ဖြေ >> မိဘ​တွေအ​နေနဲ့ လုပ်​​ဆောင်​​ပေးရမှာ နှစ်​ပိုင်းရှိတယ်​။ မိဘ​တွေကိုယ်​တိုင်​က က​လေးကို စိတ်​ရှည်​စွာနဲ့ language exposure - ဘာသာစကားနဲ့ ထိ​တွေ့ခွင့်​​ များများ​ပေးရမယ်​။ ​နောက်တစ်​ပိုင်းက​တော့ တတ်​ကျွမ်းနားလည်​တဲ့ ပညာရှင်​များနဲ့ တိုင်​ပင်​​ဆွေး​နွေးပြီး ကုသမှုခံယူရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
မိဘ​တွေ ဖန်​တီး​ပေးရမယ့်​ အခွင့်​အလမ်းများ
# မိဘ​တွေအ​နေနဲ့ သားသမီးအတွက်​ အချိန်​ပို​ပေးပြီး စကားများများ​ပြော​ပေးပါ။ စကား​ပြောတဲ့အခါမှာ က​လေးနဲ့ မျက်​လုံးတစ်​တန်းတည်း (same eye level) ​နေပြီး ဖြည်းဖြည်းမှန်​မှန်​နဲ့ ရှင်းလင်းစွာ ​ပြောရပါမယ်​။
# ​နေ့တိုင်း က​လေးစိတ်​၀င်​စားမယ့်​ စာအုပ်​(ပုံပြင်​ + ကာတွန်း) ​တွေကို ဖတ်​ပြ​ပေးပါ။ က​လေး လက်​လှမ်းမီတဲ့၊ မြင်​သာတဲ့ ​နေရာ​တွေမှာ စာအုပ်​၊ ပိုစတာ​တွေနဲ့ language rich environment ဖြစ်​​အောင်​ ဖန်​တီး​ပေးပါ။
# Expansion behaviour ဆိုတဲ့ ချဲ့​ပြောတဲ့ စနစ်​ကို သုံး​ပေးပါ။ ဥပမာ - က​လေးက "ဆင်​"လို့ ​ပြောရင်​ မိဘက "ဆင်​ကြီးက အကြီးကြီးပဲ" ၊ "ဆင်​က ကြံ​တွေကို စားတယ်​"ဆိုပြီး ချဲ့​ပြော​ပေးရပါမယ်​။
# က​လေးက စကားစမ်း​ပြောတဲ့အခါ သူ​ပြောတာ အားလုံးကို လိုက်​ပြန်​​ပြောတဲ့ Imitation behaviourဆိုတဲ့ စနစ်​ကိုလည်း သုံးသင့်​ပါတယ်​။
# Responsive questioning behaviour ဆိုတဲ့ ​မေးခွန်း​လေး​တွေ ​မေး​ပေးတဲ့ စနစ်​ကလည်း အရမ်း​ကောင်းပါတယ်​။
# Bilingual children ဆိုတဲ့ မိခင်​ဘာသာစကား နှစ်​မျိုးနဲ့ အထက်​​ပြောရတဲ့ က​ပြား က​လေး​တွေအတွက်​ဆိုရင်​ "One Parent One Language (OPOL) Rule"ကိုသုံး​ပေးပါ။ မိခင်​နဲ့ ဖခင်​က တစ်​ဘာသာစီကို ခွဲပြီး ပုံ​သေ​ပြော​ပေးရတဲ့ စည်းမျဉ်းကို သုံးခြင်းဟာ က​လေးအတွက်​ မှတ်​ရတာ ပိုလွယ်​​စေနိုင်​ပါတယ်​။
# မိဘ​တွေအ​နေနဲ့ မိမိက​လေးကို late talkerလို့ သံသယ၀င်​ခဲ့ရင်​ က​လေး​ဆေးရုံ​တွေမှာ Speech-Language Pathologist​တွေနဲ့ ​ဆွေး​နွေးတိုင်​ပင်​ပြီး အ​ကြောင်းအရင်းကို ရှာရပါမယ်​။ ဒီဘာသာစကားပညာရှင်​​တွေဟာ က​လေးရဲ့ ဦး​နှောက်​ဖွဲ့စည်းပုံ ချို့ယွင်းချက်​ရှိမရှိ၊ sound producing mechanism ​ဆိုတဲ့ အသံထွက်​ ကိရိယာအစိတ်​အပိုင်း​တွေဖြစ်​တဲ့ လျှာ၊အာသီး၊ အသံအိုး၊ ​လေပြွန်​တို့မှာ အမှားအယွင်းရှိမရှိ၊ ပြင်းထန်​တဲ့ ပတ်​၀န်းကျင်​ရဲ့ ရိုက်​ခတ်​မှု​တွေ​ကြောင့်​ စိတ်​ဒဏ်​ရာ​တွေရှိမရှိ စစ်​​ဆေးပြီး အ​ကြောင်းရင်းရှာကြပါလိမ့်​မယ်​။
# Language disorder ရှိတဲ့ က​လေး​တွေအတွက်​ အကြားအာရုံ စစ်​​ဆေးမှု (Audiological assessment) လုပ်​​ပေးရပါမယ်​။
# Late talker​လေး​တွေကို ဂရုတစိုက်​ စိတ်​ရှည်​လက်​ရှည်​​ ​လေ့ကျင့်​​ပေးနိုင်​တယ့်​ မူကြိုကို မိဘ​တွေအ​နေနဲ့ ဂရုတစိုက်​ ​ရွေးချယ်​ရပါမယ်​။ ပြီး​တော့ က​လေးရဲ့ အ​ခြေအ​နေကို ​ကျောင်းတာဝန်​ရှိသူ​တွေနဲ့ ​ဆွေး​နွေးပြီး သူတို့ရဲ့ လမ်းညွှန်​ချက်​​တွေကို လိုက်​နာရပါမယ်​။
အ​ထက်​က အ​ကြောင်းအရာ​တွေက​တော့ မိဘအများစု သိချင်​ကြတဲ့ ​မေးခွန်း​တွေကို ​​လေ့လာမိသ​လောက်​ ​ကြိုးစား​ဖြေပြထားတာပါ။ က​လေး​တွေနဲ့ ပတ်​သက်​တဲ့ ထာဝရမှန်​ကန်​တဲ့ ပရမတ္တ သစ္စာတရား - Universal truth တစ်​ခုရှိပါတယ်​။ အဲဒါက​တော့ "Every child is unique" ဆိုတဲ့စကားပါ။ က​လေးတစ်​​ယောက်​ချင်းစီဟာ ကိုယ်​ပိုင်​သီးခြား ၀ိ​သေသနဲ့ ​မွေးဖွားလာကြတဲ့ လူသား​တွေပါ။ သူ့က​လေးက ဒီအချိန်​မှာ ဒီလိုဖြစ်​လို့ ငါ့က​လေးလည်း ဖြစ်​ရမယ်​ဆိုပြီး ​ယောင်​လို့​တောင်​ မ​တွေးပါနဲ့။ အကယ်​၍ ကိုယ့်​က​လေးကို late talkerလို့များ သံသယရှိခဲ့ရင်​ ပတ်​၀န်းကျင်​က တတ်​​ယောင်​ကားစကား​တွေကို ဂရုမစိုက်​ပဲ တတ်​ကျွမ်းသူ​တွေနဲ့ပဲ တိုင်​ပင်​ပါလို့ပဲ အကြံ​ပေးလိုက်​ပါရ​စေ။
(ရင်​သွေး​​ငယ်​​တိုင်း​ရဲ့ တီတီတာတာ စကားသံ​လေး​တွေနဲ့ ကမ္ဘာ​မြေကြီးရဲ့ အလှဆုံး ​တေးသွား​တွေကို သီကျူးနိုင်​ကြပါ​စေသား...)